baseline - Synonyms of baseline | Antonyms of baseline | Definition of baseline | Example of baseline | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for baseline
Top 30 analogous words or synonyms for baseline
ဆလီနီအာကာသယာဉ် Ouna used Very Long Baseline Interferometry asasecond way to map the Moon's gravity field. It was especially useful at the lunar limb, where the gravitational acceleration is perpendicular to the line of sight to earth, making Doppler measurements unsuitable.
ဆေးဝါးဗေဒ 289. Ketalar, Ketamine = မေ့ဆေးထိုးဆေး၊ Anaesthetic Dose = 450-1000 mg IM, 50-350 mg IV; Onset = 3-5 minutes; Duration = 1.5 –2hours; Back to baseline = 4-6 hours; Children =5mg/kg IM 1.25 mg/kg IV ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အစားပျက်၊ အိပ်မက်မက်၊ အသက်ရှူခက်၊ နှလုံးခုန်မမှန်၊
လက်ပံတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာ (၂ဝ)လေထု အရည်အသွေး တိုင်းတာမှု (Existing Baseline Air Quality Monitoring) ကို လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း မစတင်မီ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ပုံမှန်လေထု အရည်အသွေး တိုင်းတာမှုကို စီမံကိန်းနေရာနှင့် အနီးဝန်းကျင် နေရာများ၌ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေစဉ်ကာလ (Operation Phase) တွင်လည်း ပြုလုပ် သင့်ကြောင်း၊ ရရှိလာသော ရလဒ်များအပေါ် မူတည်၍ လေထု အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော လုပ်ငန်းများအား သတ်မှတ် ထားသော လေထုအရည်အသွေး ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်သည့် နည်းလမ်းများ (Mitigation Measures) ဖြင့် လေထုအရည်အသွေး ကောင်းမွန်လာစေရန် ကာကွယ်ခြင်း (Air Quality Control) ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ကြေးနီ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် အနီးဝန်းကျင်ရှိ ဒေသခံ ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချက်များ၊ မှတ်တမ်းများ (Medical Record) လည်း ထားရှိသင့်ကြောင်း၊ ကြေးနီ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေသည့် နေရာများ၊ အထူးသဖြင့် ကံကုန်းကျေးရွာရှိ အက်စစ် စက်ရုံနှင့် နီးသော စာသင်ကျောင်းဝန်းကျင် နေရာတွင် အက်စစ်အမှုန် (acid dust) များ ပါဝင်မှုကို တိုင်းတာသင့်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။
လက်ပံတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာ ၂၆။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ဝ ရက်နေ့ နံနက် ၁ဝ:၃ဝ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁၂:၃ဝ နာရီအထိ လွှတ်တော်ဝင်း (အိုင်-၁၂) အဆောင်ရှိ အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်နှင့် မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ (Myanmar Environment Institute-MEI) နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ (Technical Experts Team) အဖွဲ့ဝင် သုတေသီ ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံသည့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့ ပတ်ဝန်းကျင် သိပံ္ပဘက်မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာဝင်းမောင်နှင့်အတူ အခြားပညာရှင် ၁၁ ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံအဖွဲ့က လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီသတ္တုတူးဖော်ရေး စီမံကိန်းအတွက် အချိန်တိုအတွင်း အရေးပေါ်လေလာ့ အကဲဖြတ် စိစစ်ချက် (Immediate Assessment of Letpadaungtaung Copper Mining Project) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဂေဟစနစ် (Ecosystem-Flora & Fauna and Pollution of Air, Water, Sediment) (Existing Baseline Air Quality Status)၊ လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း အပေါ် လူမှုဝန်းကျင် ရှုထောင့်မှ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ (Immediate Cultural Impact Assessment)၊ (Project Development and Environmental Management) (Environmental Science and Engineering) ရှုထောင့်မှ ကွင်းဆင်းလေ့လာ တွေ့ရှိချက် များကို ပြည့်စုံစွာ တင်ပြသွားကြသည်။ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ထပ်မံသိလိုသော အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများကို မေးမြန်းဆွေးနွေးရာတွင် MEI ကျွမ်းကျင်သူ သုတေသီအဖွဲ့က စေ့ငုစွာ ပြန်လည် ရှင်းလင်းဖြေကြား သွားခဲ့ကြသည်။